“Masina, Masina, Masina Jehovah” (Isaia 6) | Manatòna
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Baoulé Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Géorgien Haoussa Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kambôdzianina Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niue Norvezianina Oromo Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Rarotonga Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Twi Uruund Venda Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
1, 2. Momba ny inona ny fahitana azon’i Isaia, ary inona no lazain’izany amintsika momba an’i Jehovah?
SADY gaga no natahotra i Isaia, rehefa nahazo fahitana avy tamin’Andriamanitra. Toy ny tena izy ilay izy! Nilaza i Isaia tatỳ aoriana fa ‘nahita ny Tompo’ teo amin’ny seza fiandrianany manerinerina. Nameno an’ilay tempoly goavana tany Jerosalema ny akanjo lavan’i Jehovah.—Isaia 6:1, 2.
2 Gaga sy natahotra koa i Isaia rehefa nandre hira mafy be nampihozongozona ny fototry ny tempoly mihitsy. Anjely ambony laharana, atao hoe serafima, no nanao an’io hira io. Tsotra, nefa manan-danja, ny tonon’ilay hira mafy sy mirindra: “Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; henika ny voninahiny ny tany rehetra.” (Isaia 6:3, 4) Manamafy manokana ny fahamasinan’i Jehovah ny fihirana intelo an’ilay hoe “masina”, ary rariny izany satria masina indrindra izy. (Apokalypsy 4:8) Antitranterina manerana ny Baiboly ny fahamasinan’i Jehovah. Misy andininy an-jato mampifandray ny anarany amin’ny hoe “masina”, na “fahamasinana.”
3. Inona no hevi-dison’ny olona momba ny fahamasinan’i Jehovah, ka mahatonga azy ireo handositra, fa tsy hanatona azy?
3 Mazava àry fa anisan’ny zava-dehibe tian’i Jehovah ho fantatsika ny hoe masina izy. Izany fotsiny anefa dia efa mampandositra ny sasany. Misy diso hevitra ka milaza fa ny mihevi-tena ho marina sy miseho ho tia fivavahana no atao hoe masina. Mety ho vao mainka hampandositra, fa tsy hahasarika ny olona mihevi-tena ho tsy mendrika ny fahamasinan’Andriamanitra. Mety hihevitra izy fa tsy mendrika ny hanatona an’io Andriamanitra masina io mihitsy. Maro àry no mandositra an’Andriamanitra, noho izy masina. Mampalahelo izany, satria tena tokony hampanatona antsika an’Andriamanitra ny fahamasinany. Nahoana? Andeha hodinihintsika, alohan’ny hamaliana izany, ny atao hoe tena fahamasinana.
Inona no atao hoe fahamasinana?
4, 5. a) Inona no dikan’ny hoe masina, ary inona no tsy dikan’ny hoe masina? b) Lazao ireo antony roa ilazana hoe “misaraka” i Jehovah?
4 Masina Andriamanitra, nefa tsy midika izany hoe tsy miraharaha na miavonavona na manambany olona izy. Halany mihitsy aza ireo toetra ireo. (Ohabolana 16:5; Jakoba 4:6) Inona àry no tena dikan’ilay teny hoe “masina”? Ny hoe masina, amin’ny teny hebreo nanoratana ny Baiboly, dia avy amin’ny teny midika hoe “misaraka.” Ampiharina amin’ny zavatra nosarahina tamin’ny hafa izy io, raha fivavahana no resahina. Manasongadina ny fahadiovana koa ny fahamasinana. Ahoana kosa rehefa ampiharina amin’i Jehovah io teny io? Midika ve izany fa “misaraka” amin’ny olona tsy lavorary izy, ka lasa lavitra antsika?
5 Tsy izany mihitsy. “Iray Masin’ny Isiraely” i Jehovah, ka nilaza fa ‘ao afovoan’ny’ vahoakany izy, na dia mpanota aza izy ireo. (Isaia 12:6; Hosea 11:9) Tsy mahatonga azy ho lavitra àry ny fahamasinany. Nahoana anefa no lazaina hoe “misaraka” izy? Voalohany, misaraka amin’ny zavaboariny rehetra izy, satria izy no Avo Indrindra. Madio tanteraka tsy misy pentina izy. (Salamo 40:5; 83:18) Ary faharoa, misaraka tanteraka amin’ny ota rehetra i Jehovah, ary mampahery izany. Nahoana?
6. Nahoana no mampahery antsika ny hoe misaraka tanteraka amin’ny ota i Jehovah?
6 Tsy fahita firy izao ny tena fahamasinana. Misy loto sy voapentin’ny ota sy ny tsy fahalavorariana ny zavatra rehetra eo amin’ity tontolo lavitra an’Andriamanitra ity. Tsy maintsy miady amin’ny ota ao anatintsika isika. Samy mety ho resin’io ota io isika, raha tsy mitandrina. (Romana 7:15-25; 1 Korintiana 10:12) Tsy mba toy izany i Jehovah. Lavitra azy mihitsy ny ota, ka tsy ho voapentin’izy io kely akory izy. Vao mainka matoky isika fa i Jehovah no tena Ray, satria midika izany fa azo itokisana tanteraka izy. Tsy hanjary ho ratsy toetra, na tsy voafehy, na hampijaly mihitsy i Jehovah, satria tsy toy ny ray olombelona mpanota. Ny fahamasinany no manakana izany tsy hisy mihitsy. Nianiana tamin’ny fahamasinany mihitsy i Jehovah indraindray, satria tsy misy zavatra azo itokisana kokoa noho izany. (Amosa 4:2) Tsy manome toky antsika ve izany?
7. Nahoana isika no milaza fa ny fahamasinana no tena maha izy an’i Jehovah?
7 Ny fahamasinana no tena maha izy an’i Jehovah. Inona no dikan’izany? Indro misy fampitahana: Eritrereto ireo teny hoe “olona” sy “tsy lavorary.” Tonga ao an-tsainao foana ny hoe tsy lavorary raha vao miteny hoe olona ianao. Ao amintsika sady mameno ny zavatra ataontsika ny tsy fahalavorariana. Eritrereto indray izao ny teny roa mifanohitra amin’ireo: “Jehovah” sy “masina.” Mameno an’i Jehovah ny fahamasinana. Madio sy marina daholo ny zavatra momba azy. Tsy afaka ny tena hahafantatra an’i Jehovah isika raha tsy mandinika tsara sy mahafantatra ny dikan’io teny lalina hoe “masina” io.
“Hamasinina ho an’i Jehovah”
8, 9. Inona no mampiseho fa manampy ny olona tsy lavorary mba ho azo lazaina hoe masina i Jehovah?
8 I Jehovah mihitsy no masina, ka rariny raha lazaina fa izy no iavian’ny fahamasinana rehetra. Tsy tia tena izy, ka tsy mihazona io toetra io ho azy irery, fa omeny anjara betsaka amin’io kosa ny olona. Rehefa niresaka tamin’i Mosesy tamin’ny alalan’ny anjely teo amin’ilay roimemy nirehitra, ohatra, i Jehovah, dia nanjary masina mihitsy ny tany nanodidina teo, satria nifandray taminy!—Eksodosy 3:5.
9 Mety ho masina ve ny olona tsy lavorary raha ampian’i Jehovah? Eny, na dia voafetra aza. Nomen’i Jehovah fahafahana ho tonga “firenena masina” ny Isiraely vahoakany. (Eksodosy 19:6) Nomeny fomba fivavahana masina sy madio io firenena io. Miverimberina ao amin’ny Lalàn’i Mosesy foana ny fahamasinana. Nisy takela-bolamena teo anoloana amin’ny hamaman’ny mpisoronabe, ka tazan’ny rehetra namirapiratra teo izany. Izao no teny voasokitra teo amin’izy io: “Hamasinina ho an’i Jehovah.” (Eksodosy 28:36) Tokony hisongadina sy hampiavaka ny fivavahana sy ny fomba fiainan’izy ireo mihitsy àry ny fahadiovana. Hoy i Jehovah tamin’izy ireo: “Aoka ho masina hianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo.” (Levitikosy 19:2) Azo nolazaina hoe masina ny Isiraelita, rehefa nanaraka ny torohevitr’Andriamanitra, araka izay azon’ny olona tsy lavorary natao.
10. Inona no naha samy hafa ny Isiraely fahiny sy ny firenena nanodidina azy, raha ny fahamasinana no resahina?
10 Nifanohitra tanteraka tamin’ny fivavahan’ireo firenena nanodidina ny Isiraely izany fanasongadinana ny fahamasinana izany. Lainga sy fitaka na dia ny fisian’ny andriamanitr’ireo firenena mpanompo sampy ireo aza. Mahery setra sy tia harena ary maloto fitondran-tena koa ny andriamanitr’izy ireo, ka tena tsy masina mihitsy. Nanjary tsy masina koa ireo nanompo azy. Nampitandrina ny mpanompony àry i Jehovah mba hanalavitra an’ireo mpanompo sampy ireo sy ny fivavahany maloto.—Levitikosy 18:24-28; 1 Mpanjaka 11:1, 2.
11. Lazao ny fomba ihariharian’ny fahamasinan’ny fandaminan’i Jehovah any an-danitra eo a) amin’ny anjely b) sy ny serafima d) ary i Jesosy.
11 Nampiseho taratry ny fahamasinan’ny fandaminan’Andriamanitra any an-danitra ny Isiraely, firenena nofidin’i Jehovah. Taratra manjavozavo anefa izany, na dia tamin’ny fotoana naha tsara indrindra ilay firenena aza. Lazaina hoe “masiny tsy omby alinalina” ireo anjely an-tapitrisa manompo an’Andriamanitra amim-pahatokiana. (Deoteronomia 33:2; Joda 14) Maneho taratra mazava ben’ny hatsaran-tarehy madion’ny fahamasinan’Andriamanitra izy ireo. Tadidio koa ireo serafima hitan’i Isaia tamin’ny fahitana. Toa milaza ny hiran’izy ireo fa manana anjara lehibe amin’ny fampahafantarana ny fahamasinan’i Jehovah eo amin’izao rehetra izao ireo anjely mahery ireo. Mbola ambonin’ireo rehetra ireo anefa i Jesosy Zanaka lahitokan’Andriamanitra. Izy no maneho taratra mazava indrindran’ny fahamasinan’i Jehovah. Rariny raha antsoina hoe “Ilay Masin’Andriamanitra” izy.—Jaona 6:68, 69.
Anarana masina, fanahy masina
12, 13. a) Nahoana no rariny raha atao hoe masina ny anaran’Andriamanitra? b) Nahoana no tsy maintsy hamasinina ny anaran’Andriamanitra?
12 Ary ny anaran’Andriamanitra? Hitantsika tao amin’ny Toko 1 fa tsy anaram-boninahitra na anarana napetaka fotsiny io. Mampiseho ny toetran’i Jehovah Andriamanitra rehetra izy io. Milaza amintsika àry ny Baiboly fa “Masina no anarany.” (Isaia 57:15) Voaheloky ny Lalàn’i Mosesy ho faty ireo naniratsira ny anaran’Andriamanitra. (Levitikosy 24:16) Mariho koa ny zavatra voalohany nolazain’i Jesosy tao amin’ny vavaka: “Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao.” (Matio 6:9) Ny hoe manamasina zavatra dia midika hoe manokana sy manome voninahitra ary manandratra azy io. Nahoana anefa no ilaina hohamasinina ny anaran’Andriamanitra izay efa tena madio?
13 Nisy nandoto tamin’ny lainga sy fanendrikendrehana io anarana masin’Andriamanitra io. Nandainga i Satana tany Edena, rehefa nilaza fa Mpanjaka miangatra i Jehovah. (Genesisy 3:1-5) Izy no mpitondra an’ity tontolo tsy masina ity, ary nataony, nanomboka teo, izay hampielezana lainga momba an’Andriamanitra. (Jaona 8:44; 12:31; Apokalypsy 12:9) Asehon’ireo fivavahana fa mpanao didy jadona sy tsy miraharaha olona ary tsy mifaditrovana Andriamanitra. Nolazain’izy ireo fa Andriamanitra no manohana ny ady feno ra mandriaka nataony. Lazaina fa kisendrasendra, na evolisiona, fa tsy asa mahatalanjona nataon’Andriamanitra, no nampisy izao rehetra izao. Tena nohosoram-potaka mihitsy ny anaran’Andriamanitra. Tsy maintsy hamasinina izy io, ary tsy maintsy averina amin’ny laoniny ny voninahitra mendrika azy. Miandrandra ny fanamasinana azy io sy ny fanamarinana ny zon’Andriamanitra hitondra isika, ary faly noho izay anjara mety horaisintsika amin’izany fikasana lehibe izany.
14. Nahoana no lazaina hoe masina ny fanahin’Andriamanitra, ary nahoana no tena ratsy ny miteny ratsy azy io?
14 Misy zavatra hafa ampifandraisina akaiky amin’i Jehovah, ary antsoina foana hoe masina. Ny fanahiny, na hery ampiasainy, izany. (Genesisy 1:2) Mampiasa an’io hery tsy hay tohaina io i Jehovah, mba hanatanterahany ny fikasany. Ataony amin’ny fomba masina sy madio ny zavatra rehetra, ka rariny raha antsoina hoe fanahy masina, na fanahin’ny fahamasinana, ny hery ampiasainy. (Lioka 11:13; Romana 1:4) Fahotana tsy ahazoana famelana ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina, anisan’izany ny finiavana hanohitra ny fikasan’i Jehovah.—Marka 3:29.
Manatona an’i Jehovah isika, satria masina izy
15. Nahoana no rariny raha matahotra an’i Jehovah isika, noho ny fahamasinany? Lazalazao ny momba io tahotra io.
15 Tsy sarotra àry ny mahatakatra ny antony ampifandraisan’ny Baiboly ny fahamasinan’Andriamanitra sy ny fahatahoran’ny olombelona azy. Milaza toy izao, ohatra, ny Salamo 99:3: “Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo; fa masina Jehovah.” Tsy misy vokany ratsy anefa io tahotra io. Tahotra noho ny fanajana ara-pivavahana lehibe kosa izy io, ary tahotra ambony karazana indrindra. Rariny raha mahatsapa izany isika, satria ambony lavitra antsika ny fahamasinan’Andriamanitra, sady madio mamirapiratra sy be voninahitra. Tsy tokony hampandositra antsika anefa izy io. Vao mainka aza tokony hisarika antsika hanatona an’Andriamanitra ny fahamasinany. Nahoana?
Manintona antsika toy ny hatsaran-tarehy ny fahamasinana
16. a) Hazavao ny fifandraisan’ny fahamasinana sy ny hatsaran-tarehy. Manomeza ohatra. b) Nahoana no manantitrantitra ny fahadiovana sy fahazavana ny filazalazana momba ny fahitana an’i Jehovah?
16 Anisan’ny anton’izany ny hoe ampifandraisin’ny Baiboly amin’ny hatsaran-tarehy ny fahamasinana. Milaza, ohatra, ny Salamo 96:6 fa ‘hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerana masin’i Jehovah.’ Mahasarika antsika ny zavatra tsara tarehy. Jereo, ohatra, ilay sary eo amin’ny pejy 33. Tsy mahafinaritra anao ve izy io? Inona no manintona eo amin’ izy io? Jereo fa madio erỳ ilay rano. Tsy maintsy ho madio koa ny rivotra eo, satria manga ny lanitra, ary miparitaka tsara ny hazavana. Ahoana anefa raha amboarina kely io sary io? Voasakan’ny fako ny fikorianan’ilay rano, feno soratsoratra ny hazo sy vato, feno zavon-tsetroka ny rivotra. Tsy hanintona antsika intsony, fa hampandositra antsika izy io amin’izay. Ampifandraisintsika amin’ny fahadiovana sy fahazavana foana ny hatsaran-tarehy. Azo iantsoana ny fahamasinan’i Jehovah koa ny hoe madio sy mazava. Tsy mahagaga raha manintona antsika ny filazalazana momba ny fahitana an’i Jehovah! Mamirapiratra, manjelatra toy ny vatosoa, mazava toy ny afo madio na toy ny metaly sarobidy indrindra ny hatsaran-tarehin’ilay Andriamanitsika masina.—Ezekiela 1:25-28; Apokalypsy 4:2, 3.
17, 18. a) Inona no nanjo an’i Isaia tamin’ny voalohany, vokatr’ilay fahitana? b) Lazao ny fomba nampiasan’i Jehovah serafima mba hampaherezana an’i Isaia. Inona no dikan’ny fihetsik’ilay serafima?
17 Tokony hahatonga antsika hihevi-tena ho ambany ve anefa ny fahamasinan’Andriamanitra? Mazava ho azy fa eny no valin’izany. Tena ambany noho i Jehovah tokoa isika, ary mbola tsy ampy aza ny teny hoe ambany, mba hilazana ny tena zava-misy. Tokony hampanalavitra antsika aminy ve izany? Jereo ny fihetsik’i Isaia rehefa nandre an’ireo serafima nilaza ny fahamasinan’i Jehovah. “Hoy izaho: Lozako! maty aho! fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin’ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny Mpanjaka, dia Jehovah, Tompon’ny maro, no efa hitan’ny masoko.” (Isaia 6:5) Nanjary tsaroan’i Isaia fa mpanota sy tsy lavorary izy, rehefa hitany ny fahamasinana lehiben’i Jehovah. Kivy be io lehilahy nahatoky io tamin’ny voalohany, nefa tsy navelan’i Jehovah ho kivy tanteraka.
18 Nisy serafima nampahery azy avy hatrany. Tamin’ny fomba ahoana? Nanidina nankeo amin’ny alitara ilay serafima, naka vainafo teo ary nampipaika izany tamin’ny molotr’i Isaia. Mety ho toa vao mainka hampanaintaina izany. Tadidio anefa fa fahitana izy io, ary maro ny zavatra tsy ara-bakiteny tao anatiny. Jiosy nahatoky i Isaia ka fantany tsara fa nisy fanatitra noho ny ota natao isan’andro teo amin’ny alitaran’ny tempoly. Nangoraka an’i Isaia ilay serafima ka nampahatsiahy azy fa afaka ny ho madio eo anatrehan’Andriamanitra izy, na dia tsy lavorary sy “maloto molotra” aza. * Eken’i Jehovah ny hihevitra olona tsy lavorary sy mpanota ho masina, na dia amin’ny fomba voafetra ihany aza.—Isaia 6:6, 7.
19. Nahoana no afaka ny ho masina amin’ny fomba voafetra isika, na dia tsy lavorary aza?
19 Marina koa izany izao. Aloky ny zavatra lehibe kokoa ireo fanatitra teo amin’ny alitara tany Jerosalema: aloky ny sorona lavorary natolotr’i Jesosy Kristy tamin’ny taona 33. (Hebreo 9:11-14) Ho voavela ny helotsika raha tena mibebaka sy manitsy ny tsy mety isika ary maneho finoana an’io sorona io. (1 Jaona 2:2) Afaka ny ho madio eo imason’Andriamanitra koa isika. Nampahatsiahy antsika toy izao àry ny apostoly Petera: “Voasoratra hoe: ‘Ho masina hianareo, satria masina Aho.’” (1 Petera 1:16) Mariho fa tsy nilaza akory i Jehovah hoe tokony hitovy fahamasinana aminy isika. Tsy mitaky zavatra tsy ho vitantsika mihitsy izy. (Salamo 103:13, 14) Tokony ho masina kosa isika, hoy i Jehovah, satria masina izy. Miezaka manahaka azy araka izay vitantsika olombelona tsy lavorary isika “zanaka malala.” (Efesiana 5:1) Asa mitohy àry ny fiezahana ho masina. Miezaka “hahatanteraka ny fahamasinana” isika, rehefa mitombo ara-panahy.—2 Korintiana 7:1.
20. a) Nahoana no zava-dehibe ny mahatakatra hoe afaka ny ho madio eo imason’ilay Andriamanitsika masina isika? b) Lazao ny vokany teo amin’i Isaia rehefa fantany fa nisy fanatitra ho an’ny fahotany.
20 Tia zavatra marina sy madio i Jehovah. Halany ny fahotana. (Habakoka 1:13) Tsy mankahala antsika izy, fa mamela ny fahotantsika kosa, raha mbola miezaka manaraka ny dia lavorarin’i Kristy Jesosy isika, ary mihevitra ny fahotana toy ny iheverany azy, izany hoe mankahala ny ratsy, ary tia ny tsara. (Amosa 5:15; 1 Petera 2:21) Maro ny vokany, rehefa takatsika fa afaka ny ho madio eo imason’ilay Andriamanitsika masina isika. Tadidio fa nampahatsiahy an’i Isaia avy hatrany ny tsy fahadiovany ny fahitany ny fahamasinan’i Jehovah. Hoy izy: “Lozako!” Niova anefa ny fomba fijeriny, rehefa takany fa nisy fanatitra ho an’ny fahotany. Niantso izay vonona hanatontosa iraka i Jehovah, ka vonona avy hatrany i Isaia, na dia tsy fantany aza hoe inona izany. Hoy izy: “Inty aho, iraho aho.”—Isaia 6:5-8.
21. Nahoana isika no afaka matoky fa afaka miezaka ny ho masina isika?
21 Natao araka ny endrik’ilay Andriamanitra masina isika, ary nomena toetra tsara sy fahafahana hahazo sy hampihatra zavatra ara-panahy. (Genesisy 1:26) Afaka ny ho masina daholo isika. Faly manampy antsika i Jehovah, rehefa miezaka ny ho masina isika. Hanjary hanatona kokoa an’ilay Andriamanitsika masina isika amin’izay. Ho hitantsika eo am-pandinihana an’ireo toko manaraka koa fa misy antony mafonja maro hanatonantsika azy!
^ feh. 18 Mety ilay teny hoe “maloto molotra” eto, satria matetika no ampiasain’ny Baiboly mba hanondroana teny na fiteny ny molotra. Tsy lavorary ny olona, ka hita betsaka eo amin’ny fomba ampiasany ny fahaizany miteny ny fahotany.—Ohabolana 10:19; Jakoba 3:2, 6.
Levitikosy 19:1-18 Inona avy no toro lalana tsy maintsy ampiharintsika, raha tiantsika ny ho masina?
Deoteronomia 23:10-15 Inona no ifandraisan’ny fahadiovan’ny vatana sy ny fahamasinana? Inona no tokony ho vokatr’izany eo amin’ny fitafiantsika sy ny fisehoantsika ankapobe ary ny tranontsika?
Romana 6:12-23; 12:1-3 Ahoana no tokony hiheverantsika ny ota sy ny fitaoman’izao tontolo izao, eo am-piezahantsika ho masina?
Hebreo 12:12-17 Ahoana no ahafahantsika ho masina hatrany?